> Resource > Lugood > Sidee soo celinta Xiriirada oo keliya ka kaabta Lugood
Waxaan kuu soo celin karaa oo keliya xiriirada ka gurmad Lugood?
Sida aynu wada ognahay in Lugood si toos ah ka dhigaysa gurmad ah ee aad iDevice marka la synced, laakiin Lugood ma ogola in aad ku eegaan iyo eegista xogta laga helo. Waxaad soo celin karaa oo keliya gurmad oo dhan. Dadka waxay soo wici "All ama Waxba". Maxaa dhacaya haddii aan doonayo in kaliya xiriirada in file gurmad ah? Ma suurogalbaa? Dhab ahaantii, waa. Waxaa jirta waddo dadka sida aad u isticmaali karto in ay ku eegaan eegista iyo kabsado xogta laga gurmad Lugood ee file ah.
Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa Lugood gurmad shawladda sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) . Waxay kaa caawin karaan inaad Macdan ku jira oo dhan in gurmad Lugood, si aad iyaga ka eegi kartaa mid mid markaasna aad u hesho waxyaabaha aad rabto. Waxay arrintu u muuqataa weyn, miyaanay ahayn? Barnaamijka waxaa inoo siiya si version tijaabo ah. Waa maxay sababta aan u qaataan in ay leeyihiin isku day ah oo hadda? Download oo ku xidh on your computer iyadoo la isticmaalayo xiriirka hoose.
Marka aad ogaato in aad xiriir badiyay aad iPhone, wuu xusuusan waayay inuu u hagaagsan aad iPhone la Lugood mar kale, ka hortagga gurmad Lugood ee file ka updated. Markaasay aad u hesho barnaamij ku habboon oo uu ku sameeyo dib u soo kabashada xogta sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Next, aynu wada isku day la version Mac of Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Dadka isticmaala Windows sidoo kale waxa ay raaci karaan si ay u qaadaan talaabooyin la midka ah ee aad kombiyuutarada Windows.
Tallaabada 1. Dooro file gurmad ah oo Macdan
Uma baahnid in aad in aad ogaato faylka gurmad meesha Lugood meelaha on your computer. Wondershare Dr.Fone Ee macruufka si toos ah iyaga ka heli kartaa ka dib marka aad u abuurtaan. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa xulashada habka soo kabashada oo ka mid ah ka soo kabsado Lugood ee kaabta File on sare ee suuqa kala barnaamijka. Markaas dooran faylka gurmad u ah iPhone, iPad ama iPod taabto, oo guji Start Scan si ay u soo saaro.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xiriirada ka gurmad Lugood
Marka scan ka istaago, aad arki doonaa in dhammaan xogta ku file gurmad waxaa lagu soo saaro oo soo bandhigay qaybaha. Waxaad ku eegaan karo iyo fiiri mid mid. Wixii xiriiro, waxaad ka akhrisan kartaa magaca, lambarka taleefanka, shirkad, jagada shaqada, cinwaanka email, iwm Haddii waxyaabaha aad rabto in aad ku sugan tahay liiska, aad sax karaa ceshan iyaga adigoo gujinaya ku Ladnaansho button. Xiriirada waa la badbaadin doonaa sida CSV, VCF iyo HTML qaab files ugu kala duwan ee mustaqbalka.
Fiiro gaar ah: Haddii aadan haysan gurmad Lugood ah oo doonaya in ay soo kabsadaan xiriirada tirtiray aad iPhone, weli waxaa jira hab. Waxa aad tilmaan-ka akhrisan kartaa halkan: Ladnaansho iPhone Xiriirada aan kaabta Lugood .
Kabsado SMS ka iPhone : Tilmaan-bixiyahan waxa ay muujinaysaa sida ay u soo ceshano fariimaha qoraalka ah tirtiray ka iPhone siyaabo kala duwan aad. Ladnaansho Call History on iPhone : kabsado Waxaad kartaa liiska wac iPhone si toos ah uga iPhone ama Lugood gurmad, oo ay ku jiraan wacay, xilka iyo seegay. Ladnaansho Notes ka iPhon : Maqaalkani waxa uu idin ​​tusiyo, si ay u soo ceshano qoraalada lumay on iPhone ah in talaabooyin. Ladnaansho iPhone farriinta codka , Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sababta looduubay oo la raadsan karo iyo sida dib u soo ceshano looduubay oo iPhone laba siyaabood. Ladnaansho Videos on iPhone : Maqaalkani tusaysaa sida inuu ka soo kabsado lumay videos on iPhone laba siyaabood.